China ehlanganisiwe Rubber Seal ifektri abakhiqizi | UTianzheng
Ehlanganisiwe Rubber Seal
Izinto eziyinhloko zokugoqa i-rubbers yi-EPDM, isizathu ukuthi injoloba ye-EPDM hhayi ngesimo sezulu esihle, i-UV, ukumelana ne-ozone, kepha futhi nangokumelana nokushisa okuphezulu nokuphansi kakhulu, ngakho-ke izinto ze-EPDM ezisetshenziswa kakhulu ohlelweni lokufaka uphawu lwezimoto.
Ukugoqa irabha ohlelweni lwezimpawu zezimoto kunesikhundla esibaluleke kakhulu, umugqa wenjoloba wokuthwala uphawu ngaphezu kwensimbi eyisisekelo futhi wehlise umsindo womoya, kepha futhi kunikeza nomhlahlandlela wesitimela nokusekela ukuphakamisa ingilazi.
Ukuthutheleka ngokuzenzakalela kwe-EPDM yerabha yensimbi kuvame ukwenziwa nge-polyamide noma i-polyester fiber wool, futhi kwesinye isikhathi kuhlanganiswa ne-polyamide ne-polyester fiber. Ubude be-villi bungu-0.5-0.8mm kanti iningi lama-villi limnyama.
Inqubo yokuthutheleka ikakhulu iqukethe ukwelashwa kwangaphambili, ukunamathela, ukuhlangana kwe-electrostatic nokwelapha. Ngemuva kokuphulukiswa, umucu wokunamathela uzohlanza i-villi entantayo, bese uyisika ngosayizi othize, ayifake ebhokisini lokupakisha, bese uyihlola ukuthi igcinwe kuphi, idilivwa yini noma iyafakwa.
Ubulukhuni 65shore A ukuya ogwini olungu-80 u-A
Ubuningi 1.35g / cm3
Amandla eqine > = 7Mpa
Iphakheji sika ubude obuthile noma ngokuya ngendlela obudinga ngayo
Izinto ezisezingeni eliphakeme kanye nokwenziwa.
Imiklamo eminingana ongakhetha kuyo.
Ivimbela uthuli nesimo sezulu.
Ukufakwa okulula nokugcinwa.
Izindleko zingambi eqolo.
Ingashintshwa ukuze ivumelane nesicelo sakho.
Ezimoto, ama-rubbers agcwele asetshenziselwa iminyango, amawindi ophahla lwelanga. Lapha, benza umsebenzi okabili: ukubekwa uphawu komzimba kanye nokwenza lula imisebenzi yokuvula nokuvala ngamandla aphansi. Izinzuzo zobuchwepheshe bokuthutheleka zingachazwa kusetshenziswa isibonelo sefasitela eliseceleni kwemoto. Ukuhamba kwepaneli yengilazi ngaphezulu kwephrofayili yenjoloba kudinga ukusetshenziswa kwamandla aphakeme kakhulu. Ngokuya ngomthetho wokushayisana, ibutho lokushayisana elilinganiswe lapha lichazwa njenge-coefficient of friction. Endabeni yengilazi / irabha, lokhu kungaphezu kuka-1. Ukugoqa irabha kunganciphisa ukulingana kokungqubuzana kube ngu-0.25-0.3
Ukuthutheleka kwephrofayili e-vulcanized kwinqubo eqhubekayo kuyindlela enengqondo kunazo zonke. Ngemuva kokukhishwa, iphrofayli icushiwe esiteshini se-UHF nasesiteshini somoya oshisayo. Isinamatheliso siyabe sesisetshenziswa ngaphezulu lapho sesipholile saya cishe ku-110`C futhi sathanjiswa. Lokhu kulandelwa ukuthutheleka bese kuphulukiswa okunamathiselwe cishe ku-170`C imizuzu engu-2-3.
Langaphambilini Emapheshana Ukuvikelwa Seal emapheshana
Olandelayo: I-Foam Rubber Strip ene-Adhesive Tape
Ukuvalwa Izimpawu Zenjoloba